ज्ञानेन्द्र शाहीलाई, पुण्य गौतमको प्रश्न: साइकलमा प्रेसर कुकर बेच्नेसँग २ वटा गाडी कहाँबाट आयो? (भिडियो हेर्नुस्) – PathivaraOnline
Home > भिडियो > ज्ञानेन्द्र शाहीलाई, पुण्य गौतमको प्रश्न: साइकलमा प्रेसर कुकर बेच्नेसँग २ वटा गाडी कहाँबाट आयो? (भिडियो हेर्नुस्)
admin June 16, 2021 भिडियो, समाचार	0
एजेन्सी । सामाजिक अभियन्ता पुण्य गौतमले सामाजिक अभियन्ता ज्ञानेन्द्र शाही साइकलमा प्रेसर कुकर बेच्ने खुलासा गरेका छन्। गौतमले शाहीले केहि वर्ष अगाडी साइकलमा प्रेसर कुकर बेच्ने गरेको खुलासा गरेका छन्।
ज्ञानेन्द्र शाहीले देश-विदेशमा रहेका इमान्दारी दाजुभाईहरुले पठाएको पैसा लुटेको आरोप लगाएका छन्। एक मिडियासंग कुरा गर्दै उनले एक वर्ष अगाडीसम्म शाही २५ हजार तलवमा काम गर्दै आएको बताएका छन्।
उनले भने, “शाही एक वर्ष अगाडीसम्म साइकलमा प्रेसर कुकर बेच्ने गर्थे। एक वर्ष अगाडीसम्म राजावादीको लागि २५ हजार तलवमा काम गर्दै आएका थिए। तर अहिले उनीसंग २ वटा कार र २ जना चालक समेत राखेका छन्। त्यो पैसा कहाँ बाट आयो।
“हिजोसम्म ३ पटक मोटरसाइकल बन्द हुने चलाएर हिडेका उनीसँग अहिले २ वटा गाडी छ। करोडपतिको जस्तो जीबन जिएक छन्। त्यो पैसा कहाँ बाट आयो ?” उनले भने, “दुनियाको अगाडी धाटर छलेर पैसा कमाउने उनको योजना छ। अब हामी सचेत हुन जरुरि छ। नत्र ज्ञानेन्द्र शाहीले भ्रष्टाचार धेरै गर्नेछ।”-फाइल फोटो ।
भा’रततिर लै’जा’दै ग’रिएकि १७ ब’र्षि’या यु’व’ती
यसकारण विदेशिन बाध्य हुन्छन देशप्रेमी नेपालीहरू… – हेर्नुहोस् भिडियो
अर्कै युवकसंग भागेकि श्रीमति दुई महिना पछि घर फर्किदा … (भिडियो हेर्नुस्)